အချစ်ဟာသဝတ္ထု ချိုချိုလေးနှစ်သက်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် "သစ်ခက်ငါး" - For her Myanmar
ဘယ်နှစ်ခေါက်ဖတ်ဖတ် ရယ်နေရတုန်း… <3
ယောင်းရေ…. ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ အားလပ်ရက်ကို အချစ်ဟာသ ဝတ္ထုချိုချိုလေးဖတ်ရင်း ကျော်ဖြတ်ကြရအောင်… ယောင်းတို့ ဖတ်ဖို့ အက်ဒ်မင်ညွှန်းပေးချင်တဲ့ အချစ်ဝတ္ထုလေးနာမည်က သစ်ခက်ငါး တဲ့။
နာမည်လေးက ဆန်းတယ်ဟုတ် ? ဒီ ဝတ္ထုက အက်ဒမင်တို့ ကလေးဘဝကတည်းက ထွက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်အချိန်ဖတ်ဖတ်ကြည်နူးစရာလေးပေါ့။ တချို့အချစ်ဝတ္ထုတွေလို လက်တွေ့ဘဝတွေနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ ဝတ္ထုမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ပါးစပ်မစေ့အောင် ရယ်နေရတယ်လေ။
ဒီစာအုပ်ကို ပထမပိုင်း နဲ့ ဒုတိယပိုင်း နှစ်အုပ်တွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ လက်ရာကောင်းများစွာကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဆရာ နီကိုရဲ ပါ။ ဟိုတစ်ခေတ်က ဗီဒီယိုကားအဖြစ် လည်းထွက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ကဲ .. ဒါဆို ဝတ္ထုရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကို ကြည့်ကြရအောင်…
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိက ဇာတ်လိုက်ကောင်မလေးက သစ်ခက် တဲ့။ သူ့မှာ ထူးခြားတဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ လမ်းမှာ တွေ့တဲ့ ပစ္စည်းတိုင်းကို ကောက်တတ်တဲ့အကျင့်ပေ့ါ။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေက ဒီအကျင့်ကို ဖျောက်ပါဆိုတာလည်း မဖျောက်ဘူးရယ်..
တစ်နေ့တော့ သစ်ခက် တစ်ယောက် ငါးဆယ်တန် တစ်ရွက်ကို ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ တွေ့ပါလေရော။ (အဲ့ခေတ်က ငါးဆယ်တန်က ဒီခေတ် ငါးရာတန် ဒါမှမဟုတ် ငါးထောင်တန်လောက် တန်ဖိုးရှိမလားမသိဘူးနော် တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့လေ)
သစ်ခက်တစ်ယောက် အဲ့ဒီ ငါးဆယ်တန်ကို အကြောင်းပြုလို့ စိုးချိန် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် နဲ့ ဆုံဆည်းရပါတော့တယ်။ ငါးဆယ်တန်ကိုအကြောင်းပြုပြီး ဆုံဆည်းရသူမို့ သစ်ခက် က ငါး လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သစ်ခက် နဲ့ ငါး တို့ ချစ်ခရီးလမ်း စတင်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးချင်တော့ သစ်ခက် ရဲ့ ဖေဖေ ဦးဘခက်က သစ်ခက်တို့အကြောင်းကို သိသွားရော..
သစ်ခက်မှာ သူ့မိဘတွေ သဘောတူထားတဲ့သူရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး သစ်ခက် က သူ့ဖေဖေကို အရမ်းကြောက်ရတဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် သစ်ခက်ကို အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်တောင် မပြုတော့ပါဘူး။
Related Article >>> မကြည်ပြာနှင့် ချစ်ခြင်း၏ နဂ္ဂတစ်များကို စားမြုံ့ပြန်ခြင်း
ဒီအခါ သစ်ခက်ကို အရမ်းချစ်တဲ့ ငါး တစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်တော့တာပေါ့။ သစ်ခက် ကို ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်ရဖို့ ငါး တစ်ယောက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတော့တယ်။
သိပ်ချစ်ကြတဲ့ သစ်ခက် နဲ့ ငါး တို့ ဆုံစည်းနိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ဒီဝတ္ထုလေးထဲမှာ ဆက်ကြည့်နော်… ဇာတ်လမ်းက အရမ်း မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရေးသားကလည်း ကောင်းသလို ဟာသတွေလည်းပါတော့ ယောင်းတို့ သဘောကျမှာပါ။
ချစ်စရာ အချစ်ဟာသ ဝတ္ထုလေးဖတ်ပြီး ယောင်းတို့ အားလပ်ရက်ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေရှင်..
ဘယျနှဈခေါကျဖတျဖတျ ရယျနရေတုနျး… <3
ယောငျးရေ…. ဒီတဈပတျရဲ့ အားလပျရကျကို အခဈြဟာသ ဝတ်ထုခြိုခြိုလေးဖတျရငျး ကြျောဖွတျကွရအောငျ… ယောငျးတို့ ဖတျဖို့ အကျဒျမငျညှနျးပေးခငျြတဲ့ အခဈြဝတ်ထုလေးနာမညျက သဈခကျငါး တဲ့။
နာမညျလေးက ဆနျးတယျဟုတျ ? ဒီ ဝတ်ထုက အကျဒမငျတို့ ကလေးဘဝကတညျးက ထှကျခဲ့တဲ့စာအုပျပါ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျအခြိနျဖတျဖတျကွညျနူးစရာလေးပေါ့။ တခြို့အခဈြဝတ်ထုတှလေို လကျတှဘေ့ဝတှနေဲ့ ကငျးကှာနတေဲ့ ဝတ်ထုမြိုးလညျး မဟုတျပါဘူး။ နောကျပွီး ပါးစပျမစအေ့ောငျ ရယျနရေတယျလေ။
ဒီစာအုပျကို ပထမပိုငျး နဲ့ ဒုတိယပိုငျး နှဈအုပျတှဲထုတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ စာရေးသူကတော့ လကျရာကောငျးမြားစှာကို ဖနျတီးခဲ့တဲ့ ဆရာ နီကိုရဲ ပါ။ ဟိုတဈခတျေက ဗီဒီယိုကားအဖွဈ လညျးထှကျရှိအောငျမွငျခဲ့ပါသေးတယျ။
ကဲ .. ဒါဆို ဝတ်ထုရဲ့ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကို ကွညျ့ကွရအောငျ…
ဒီဇာတျလမျးရဲ့ အဓိက ဇာတျလိုကျကောငျမလေးက သဈခကျ တဲ့။ သူ့မှာ ထူးခွားတဲ့အကငျြ့ရှိတယျ။ လမျးမှာ တှတေဲ့ ပစ်စညျးတိုငျးကို ကောကျတတျတဲ့အကငျြ့ပေ့ါ။ သူ့ သူငယျခငျြးတှကေ ဒီအကငျြ့ကို ဖြောကျပါဆိုတာလညျး မဖြောကျဘူးရယျ..
တဈနတေ့ော့ သဈခကျ တဈယောကျ ငါးဆယျတနျ တဈရှကျကို ဘတျဈကားပျေါမှာ တှပေ့ါလရေော။ (အဲ့ခတျေက ငါးဆယျတနျက ဒီခတျေ ငါးရာတနျ ဒါမှမဟုတျ ငါးထောငျတနျလောကျ တနျဖိုးရှိမလားမသိဘူးနျော တျောတျောကွာပွီဆိုတော့လေ)
သဈခကျတဈယောကျ အဲ့ဒီ ငါးဆယျတနျကို အကွောငျးပွုလို့ စိုးခြိနျ ဆိုတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ နဲ့ ဆုံဆညျးရပါတော့တယျ။ ငါးဆယျတနျကိုအကွောငျးပွုပွီး ဆုံဆညျးရသူမို့ သဈခကျ က ငါး လို့ ခဈြစနိုးချေါပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သဈခကျ နဲ့ ငါး တို့ ခဈြခရီးလမျး စတငျကွတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ကံဆိုးခငျြတော့ သဈခကျ ရဲ့ ဖဖေေ ဦးဘခကျက သဈခကျတို့အကွောငျးကို သိသှားရော..
သဈခကျမှာ သူ့မိဘတှေ သဘောတူထားတဲ့သူရှိပါတယျ။ နောကျပွီး သဈခကျ က သူ့ဖဖေကေို အရမျးကွောကျရတဲ့သူပါ။ ဒါကွောငျ့ သဈခကျကို အိမျထဲက အိမျပွငျထှကျခှငျ့တောငျ မပွုတော့ပါဘူး။
Related Article >>> မကွညျပွာနှငျ့ ခဈြခွငျး၏ နဂ်ဂတဈမြားကို စားမွုံ့ပွနျခွငျး
ဒီအခါ သဈခကျကို အရမျးခဈြတဲ့ ငါး တဈယောကျ ဒုက်ခရောကျတော့တာပေါ့။ သဈခကျ ကို ပွနျလညျဆကျသှယျခှငျ့ရဖို့ ငါး တဈယောကျ အစှမျးကုနျကွိုးစားပါတော့တယျ။
သိပျခဈြကွတဲ့ သဈခကျ နဲ့ ငါး တို့ ဆုံစညျးနိုငျမှာလားဆိုတာကိုတော့ ဒီဝတ်ထုလေးထဲမှာ ဆကျကွညျ့နျော… ဇာတျလမျးက အရမျး မထူးဆနျးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အရေးသားကလညျး ကောငျးသလို ဟာသတှလေညျးပါတော့ ယောငျးတို့ သဘောကမြှာပါ။
ခဈြစရာ အခဈြဟာသ ဝတ်ထုလေးဖတျပွီး ယောငျးတို့ အားလပျရကျကို ပြျောရှငျစှာဖွတျသနျးနိုငျကွပါစရှေငျ..
Tags: Book review, Comedy, Couple, cute, Funny, holiday, love, novel